Warsaxaafadeed: Ha’yada Innovate Venture oo ah hay’ada hormoodka u ah kobcinta ikhtiraaca teknoolojiyada iyo ganacsiga - Latest News Updates
Warsaxaafadeed: Ha’yada Innovate Venture oo ah hay’ada hormoodka u ah kobcinta ikhtiraaca teknoolojiyada iyo ganacsiga
HARGEISA, Somaliland- Ha’ada Innovate Venture, oo ah hay’ada hormoodka u ah kobcinta ikhtiraaca teknoolojiyada iyo ganacsiga bilawga ah ee Somaliland iyo Somalia taas oo ay gacansaar ay leeyihiin VC4A, Telesom iyo Workd in Progress! Alliance, waxaa kasoo qayb galay kooxdii labaad ee dhalinyarada soo qalinjabiyay oo ka kooban 10 kasoo kala jeeda Somaliland iyo Somalia barnaamijka maalgalinta. Sanadkan waxaa barnaamijka soo gaadhay wax ka badan 400 arji, kuwaas oo ka dhashay bandhigii barnamaijka ee sanadkii lasoo dhaafay. Maalgalinta sanadkan la bixiyay waxay laba jeer kusoo laabmaysay maalintii sanadkii hore la bixiyay ee $15,000. Waxaana sanadkan la bixiyay $30,000.
Barnaamijka Innovate Accelerator waa barnaamij 12 todobaad ah oo loogu talo galay in lagu maalgaliyo jiilka cusub ee Somali-da ganacsiga abuuraya. Talo iyo todobar ayaa lasiiyay kaas oo ay bixinayeen dadka khabiiro ah iyo ganacsate. Afar kamid ah dadkaa ganacsiga yagleelayay ayay Innovate Venture u samaysay maalgalin dhan $30,000.
Barnaamijka kobcintu waxa uu gaadhay wax kabadan 2 milyan oo ruux oo lagu gaadhsiiyay Fariinta Taleefanka Gacanta iyo TV-yada kuwaas oo barnaamijka iyo Maalintii Bandhiga Somaliland, Somalia iyo Ingiriiska iyo Maraykankaba baahiyay. Koboca arjiyada iyo maalgalinta, iyo taakulada iyo sida ay u danaynayeen hay’ada shicibka iyo ganacsataduba ayaa keentay in uu kobco barnaamijku.
Axadii ay taariikhda ahayd October 29keedii ayaa Maansoor Huteel lagu qabtay Maalintaas Bandhiga, taas oo ahayd midhaha dadaal 6 bilood socday oo barnaamijku ku baadi goobayay ganacsatada cusub ee abuurtay qiimo, shaqo sidoo kalena haysta fursad ay ku koraan. Xafladaas waxaa kasoo qayb galay dad kabadan 300 oo ruux oo ay weheliyaan saxaafada, ganacsato iyo maalgaliyayaal. Koox kastaa waxay kusoo hor bandhigtay ganacsigooda gudi ka kooban ganacsato, madax iyo mulkiilayaal ganacsi.
Kaalinta kowaad waxa baxday Bilan Baby, ganacsi iibiya alaabta caruurta, agabka iyo dharkooda sidoo kale alaabaadka hooyada. Bilan Baby waxaa lasiiyay $7,000 oo maalgalin ah. Kaalinta labaad waxaa baxay SAMS, suuq ay ku kulmayaan beeralayda iyo macaamiishoodu iyo Almijet, shirkad daabacaad xayaysiisyada ah kuwaas oo midkiiba lasiiyay $5,000. Ugu danbayntiina, Brandkii, shabakan online ah oo suuqgayn iyo xayaysiis samaynaysa, kuwaas oo iyaguna heley $3,000. Waxa sidoo kale maalgalin lasiiyay Muraadso, shabakan wax lagu kala iibsado oo sanadkii horena ku guulaysatay; waxay heleen $10,000 wakhtigaas.
Warda Dirir, oo kamid ah aas aasayaasha Innovate Ventires, waxay tidhi, ‘guusha sanadkan barnaamijka kobcinta waxa uu ka yimid dadaal sanado badan ah oo deegaanka ah iyo casharo badan oo laga bartay. Waxaa naga go’an in aanu ka caawino mandaqada sidii ay u curin lahayd ganacsato dheeraad ah oo teknooloojiyada ka faa’ideeya kuwaas oo caqabadaha ganacsiga ee mandaqada xal u hela sidoo kalena abuura suuqaq aan hore loo taaban’. Marka la eego koboca barnaamijka, sanadka danbe waxaa la filayaa in arjiyada iyo maalingalintuba kordhaan, kuwaas oo kordhinaya taageerada ganacsiyada teknoolijiyaga Somali-da ee bilawga ah.